Ny fanohanana ny iraka
« Mba hanao soa, mba hanankarena amin’ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hihary fanorenana tsara ho an’ny tenany ho amin’ny andro ho avy, mba hihazonany ny tena fiainana. » 1 Tim. 6:18,19.
Andraikitry ny fiangonan’i Kristy ny mamonjy ireo mpanota very. Izany hoe, mampahafantatra ny fitiavan’Andriamanitra sy mitaona azy ireo ho eo amin’i Kristy amin’ny alalan’ilay fitiavana mahomby. Tsy maintsy entina eny amin’ireo kihon-dalana maizina rehetra eto an-tany ny fahamarinana voatokana ho an’izao ankehitriny izao, ary miantomboka ao an-tokantrano izany asa izany.
Tsy tokony hiaina fiainana feno fitiavan-tena ny mpanara-dia an’i Kristy ; fa raha vonton’ny Fanahin’i Kristy kosa izy ireo, dia hiasa amim-pirindrana miaraka Aminy.
Nanolotra drafitra ho an’ny olony Izy, dia ny mba hanangonan’izy ireo vola sahaza hahatonga ny fikambanana hahaleo tena. Drafitra tsara nataon’Andriamanitra ny rafitra momba ny ampahafolony, noho ny maha-tsotra sy mitovy azy amin’ny olona rehetra, satria ny lanitra no loharano nipoirana izany. Tafakambana ao anatin’izany ny fahatsorana sy ny maha-ilaina azy, ary tsy mitaky fianarana lalina ny fahatakarana sy ny fanatanterahana azy.
Samy mety hahatsapa avokoa ny rehetra fa manana anjara amin’ny fampandrosoana ny asam-pamonjena sarobidy. Mety ho tonga mpitahiry vola ho an’Andriamanitra avokoa, ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora tsirairay ; ka tsy hisy tsy ampy ny fanohizana ny asa goavana fampanakoakoana ny hafatra fampitandremana farany ho an’izao tontolo izao.
Ho feno ny fitahirizam-bola raha toa ka manaraka izany drafitra izany avokoa ny rehetra, ary tsy hisy mpanome ho tonga mahantra kokoa. Amin’ny alalan’ny fampiasam-bola tsirairay, dia ho tonga tafakambana ety kokoa amin’ny fitoriana ny fahamarinana ankehitriny izy ireo. Indro izy ireo fa «hihary fanorenana tsara ho an’ny tenany ho amin’ny andro ho avy, mba hihazonany ny tena fiainana.» - 1 Tim. 6:19.
Raha narahin’ny isam-batan’olona sy notanterahina tamin’ny fahafenoany ny drafitry ny asa an-tsitrapo, dia hisy fanohanana hitohy tsy tapaka ao amin’ny tahirim-bola. Hikoriana mitohy toy ny rian-drano ny vola miditra,tohanan’ireo loharano miboiboikan’ny asa an-tsitrapo.